Xoogaga Al Shabaab Oo si Nabad gelya ah kula wareegay deegaanka Haluuqa ee Gobolka NFD.
Weerarkii Hotel SYL oo sii xoogeystay.
Ciidamada Xisbada oo howlgal Burcad sifayn ah ka sameeyay deegaan katirsan gobolka Mudug.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda Qarax askar lagu dilay oo ka dhacay Ifka Xalane.
Sawirro: Kumanaan kun oo qof ayaa Xoolo Zako ah loogu qeybiyay deegaanno hoostaga magaalada Baraawe.
Thursday August 08, 2019 - 11:53:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerar hor leh oo khasaara maaliyadeed dhaliyay ayay xoogaga Al Shabaab ka fuliyeen gudaha dhulka Soomaalida NFD ee Kenya gummeysato.
Wararka ka imaanaya gobolka Gaarisa ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay xoog ku galeen deegaanka Haluuqa ee hoos yimaad Gaarisa islamarkaana kaabiga ku haya xuduud beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka kadib markii ay ciidamada Booliska iyo Melleteriga Kenya isaga firxadeen deegaanka iyagoo aan wax iska hor'imaad ah lagelin Al Shabaab.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in habeen hore ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka Haluuqa "Mujaahidiinta ayaa howlgal ku qaaday deegaanka Haluuqa ee dhulka muslimiinta NFD, ciidamadii gaalada Kenya cagaha ayay wax ka dayeen markii ay arkeen mujaahidiinta waxaana halkaas dab lagu qabad siiyay xarun ay laheyd shirkadda isgaasiinta Kenya"ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Dhinaca kale dowladda Kenya ayaa xaqiijisay weerarkan ka dhacay deegaanka Haluuqa, waa weerarkii ugu horreeyay ee bishaan gudaheeda ay Al Shabaab ka fuliso deegaannada NFD.
Al Shabaab ayaa weeraro dhiigbadan ku daatay ka fulinaysay gudaha dalka Kenya tan iyo markii ay melleteriga dowladda Kenya ku biiraan duullaanka ay ciidamada shisheeye kusoo qaadeen dalka Soomaaliya sanaddii 2011.
Gaari dagaal oo ku rogmaday deegaanka Gelinsoor ee bartamaha Soomaaliya.
Dagaal lagu wiiqay ciidamada dowladda oo ka dhacay Gobolka Hiiraan.
Weeraro lagu miray saldhigyo kuyaal sedax magaalo oo katirsan gobolka Sh/Hoose.
20 Qof Suuriyaan ah oo ku dhintay duqeymo ay diyaaradaha Ruushka ka geysteen gobolka Idlib.
Maleeshiyaad Shacab ku dilay deegaanka Gelinsoor ee gobolka Mudug.